लक्ष्य अर्कै थियो सञ्चारकर्मी बने – अनिता खत्री – Gulmiews
लक्ष्य अर्कै थियो सञ्चारकर्मी बने – अनिता खत्री
August 30, 2016 Raju Gautam
अन्तर्वार्ता, जिल्ला समाचार
गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा रहेको रेडियो रेसुङ्गागा १०६.२ मेगाहर्जमा स्थापना कालदेखि काम गर्दै आएर बिगत दुइ वर्ष यत स्टेशन म्यानेजरको भुमिका निर्वाह गर्दै आएकी गुल्मीकी महिला पत्रकार एबं पहिलो महिला स्टेशन म्यानेजर अनिता खत्री संग गरिएको कुराकानी:
तपाई लाई स्वागत छ ?
यस्तै हो सधै जसो झै आफनौ रेडियोको काममा व्यस्त छु ।
तपाई को बिचारमा रेडियो के हो जस्तो लाग्छ ?
सरल तरिकाले भन्दा रेडियो एउटा सुचना,ज्ञानवर्दक र मनोरञ्जनको सम्बाहक हो जसमा वालक देखि बृद्धा सबै अटाउछन् । रेडियो सामान्यतया सुचना र जनताबिचको पुल हो ।
तपाई बच्चै देखि रडियो कर्मी बन्ने रहर थियो ?
कुनै पनि काम बिशेषमा इच्छा नभई त्यस क्षेत्रमा त पक्कै आइदैन । तर म सानो छदा मेरो लक्ष्य अर्कै थियो । म सानै देखि नाच्न एकदमै मन पराउथे र भबिश्यमा पनि यसैलाई अगाडी वढाउन पर्छ कि भन्ने सोचमा थिए तर बिस्तारै समय पस्थिति अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रबेश गरेर सेव गर्ने सोच बनाए स्वस्थ्य कर्मी बन्नका लागी पढदै पनि गए बिस्तारै रेडियोमा पनि स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउदै गर्दा गर्दै समय बित्दै गयो अनि स्वस्थ्य कर्मीबन्ने एकजना म पछि रेडियो कर्मी भए ।
पहिलो पटक रेडियोको स्टूडियोमा बसेर बोल्दै गर्दा कस्तो महसूस भएको थियो ?
धेरै डर लाग्यो कतै मैले बोल्दै गर्दा बोल्नु पर्ने कुरा गर्दा गर्दै बिराउने त होइन भन्ने ? कतै बोल्दा बोल्दै रोकिने त होइन धेरै प्रश्नहको मलाई डर थियो भने मनै देखि इच्छा रहर पनि थियो रेडियोमा मेरो आवाज सुनाउनु र त्यो काम म पहिलो पटक गर्न पाउदा खुसि पनि थिए । बोल्दै गर्दा डर र मन भित्रको एउटा मज्जा भिन्नै थियो ।
तपाईको अनुभब मा ग्रामीण स्तर सम्म रेडियो को माध्यम ले कस्तो खालको सहयोग भए जस्तो लाग्छ ?
ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियो एउटा सुचना सञ्चारको प्रमुख माध्यम बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने सबैको पहुचमा रेडियो रहेको छ । सबैठाउमा टेलिभिजन पुगेको छैन भने सबैठाउमा पत्रपत्रिका पनि जादैनन् र सवै गाँउमा विद्युतीकरण नहुनु जस्ता समस्याहरुले पनि रेडियोको महत्व अझ बढेको छ । विश्वमा छिनछिनमा हुने ठुलाठुला घटनाहरु आप्नै घरको सानो रेडियोले जानाकारी दिने भएपछि सुचना संञ्चारमा हाम्रो गा्रमिण समाजले फडको मारेको छ । अर्को तर्फ रेडियोले समाजमा धेरै परिर्वतन पनि ल्याएको छ रेडियोले सामान्य भन्दा सामान्य समस्यादेखी जटिल समस्याहरु पनि रेडियोले उठाउदै र र ति कतिपय समस्याहरुको निराकरण गरिदिएकोले पनि रेडियोको गरिमा र महत्व अझ प्रगाढ भएको छ हाम्रो नेपाली समाजमा ।
धेरै खाए गुण पनि तितो हुन्छ भन्छन तर मलाई त्यस्तो लागेन । आफुले गर्ने काम आफुलाई कहिले पनि ठिक लाग्दैन । अरुले गरेको काम गर्न पाए हुन्थ्यो त्यो काम कति सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्ता सोचाइले मलाई कहिलेकाही सामान्य बोर लाग्छ तर एकै ठाउ यतिका समय बित्यो भनेर कहिले पनि बोर लागेन । बरु कहिलेकाही गर्भ गर्छु कि यति धेरै समयसम्म एउटै मिडियामा आफुलाई स्थापित गराउन सफल भएकोमा ।
जिल्ला स्तर मा रेडियो सञ्चालन मा र त्यहाँ का आरजे हरु लाई खÞासगरी महिला आरजे लाई कस्तो खाल का चुनौती छन जस्तो लाग्छ ?
जिल्ला स्तरमा रेडियो चलाउनु वा संञ्चालन गर्नु चुनैतीत धेरै नै छ्न । जस्तो कि आर्थिक समस्या , राजनैतीक समस्या , जनशत्तिको समस्या , लोडसेडिङ्ग को समस्या लगाएताक विभिन्न चुनैती त छ्न नै तर ति चुनैतिको वाझजुद पनि रेडियो संञ्चालन भईरहेका छ्न । अर्को महिलाको हकमा पनि चुनौती पकैपनि छन्नै महिलाहरुलाई हाम्रो समाजमा महिला भनेर हेप्ने चलन विस्तारै हटेपनि महिलाहरु पनि पुरुष हरु बरावर काम गर्न सक्छनकी सदैनन् कि भन्ने शंका गरेको देखिन्छ तर काम गदै गरिसकेपछि विश्वस गर्ने वातावरण पनि बन्दै जान्छ र बनेको पनि छ ।
महिला हरुलाई यो क्षेत्र मा कत्तिको सहज छ जस्तो लाग्छ ?
मिडिया क्षेत्र आप्फैमा जटिल पेशा नै हो अझ महिलाहरुको लागी मिडीया क्षेत्रमा चुनैतीत पक्कै छ्न । तर ति चुनैती सामाना गर्ने सामात्र्थ पनि महिलामा हुनु पर्छ र छ पनि ।
महिलाहरुको महान पर्वको एकदमै मनाइन्छ र मलाई रमाइलो लाग्छ तिज पर्व ।
तीज मा आएको बिकृति लाई के भन्नु हुन्छ ?
पर्व एउटा संस्कृति संग जोडिएको हुन्छ तिज मात्र होइन अहिले सबै पर्व भडकिलो बन्दै गएका छन् । आफनो औकात हेरेर भन्दा पनि अरुको देखासिकी गरेर मनाउने प्रबृति हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । यसलाई सबैले ख्याल गर्नु पर्ने देखिएको छ । हामी कहाँ छौ र के गद छौ भन्ने सोचियो भने यसलाई रोक्न अबस्य पनि सकिन्छ । संस्कृति भनेका हाम्रा पहिचाहन हुन संस्कृति रहे हामी रहिन्छ त्यसैले तिज पर्वमा आएको बिकृतिलाई रोक्न सबैले ध्यानदिनु पर्ने आबश्यक छ ।
अन्त्य मा अब नयाँ रेडियो को आर जे बन्न खोज्ने हरुलाई तपाई को सुझाब के छ ?
कुनै पनि क्षेत्रमा प्रबेश गर्नु भन्दा पहिले सोचेर बुझेर मात्र प्रबेश गर्दा राम्रो हुन्छ । तपाइलाई आत्मै देखि रेडियो कर्मि बन्ने रहर छ वा यस क्षेत्रमा आउदा राम्रो गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ र क्षमता पनि छ भने मिडिया क्षेत्रमा आउनुस् । एकछिन हेरम न भनेर नबुझिकिनै यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयोभने पछि सफल नहुनपनि सक्नुहुन्छ त्यसकारण राम्ररी बुझेर मात्र मिडिया क्षेत्रमा आउन सल्लाहा दिन्छु । सकेसम्म रडियो कर्मि अर्थात पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रबेश गर्दै हुनुन्छ भने राम्रो संग अध्ययन गरेर मात्र यो क्षेत्रमा आउन सल्लाह दिन्छु ।
अन्त्यमा मलाई आफनो अनुभव बिचार यहाँको मिडिया मार्फत राख्न दिनुभएकोमा तपाई र तपाईको यो पत्रिकालाई विशेष धन्यवाद दिनचाहन्छु ।
अनिता खत्री हाल गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा एफ एम को स्टेशन म्यानेजर कार्यरत हुनुहुन्छ ।